आईपीएलमा मुम्बईको अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन, अंक तालिका कुन टिम शीर्ष स्थानमा ? - ramechhapkhabar.com
भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–२० क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सले अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन गरेको छ । मुम्बईले अहिलेसम्म शुरुआती तीन वटै खेल हारेको छ । बुधबार राति पुनेमा भएको खेलमा मुम्बई कोलकाता नाइट राइडर्ससँग पराजित भयो । कोलकाता भने मुम्बईलाई ५ विकेटले हराउँदै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । मुम्बईले दिएको १६२ रनको लक्ष्य कोलकाताले १६ ओभरमै ५ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो ।
पाट कुमिन्स बिस्पोटक ब्याटिङ गर्दै १५ बलमा अविजित रहँदै ५६ रन बनाए । भेन्काटेस आयरले ५० रनको योगदान गरे । मुम्बईका मुरुगान आश्विन र ट्यामल मिल्सले २-२ विकेट लिए ।
त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १६१ रनको योगफल तयार पारेको थियो । मुम्बईका लागि सूर्यकुमार यादवले सर्वाधिक ५२ रन बनाए । कोलकाताका पाट कुमिन्सले सर्वाधिक २ विकेट लिए ।
जितसँगै कोलकाताले ४ खेलबाट ६ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । लगातार तेस्रो हारसँगै मुम्बईले अंक जोड्न सकेको छैन । मुम्बई पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । ४ अंकसहित राजस्थान रोयल्स, गुजरात टाइटान्स, पंजाब किंग्स, लखनउ सुपर जाइन्टस् र रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर क्रमशः दोस्रो छैटौं स्थानमा छन् ।
२ अंकबाट दिल्ली क्यापिटल्स सातौं स्थानमा हुँदा साविक विजेता चेन्नई सुपर सिंग्स पनि अंकविहीन हुँदै आठौं स्थानमा छ । सनराइजर्स हैदराबाद अंकविहीन हुँदै पुछारमा छ । आईपीएलमा चेन्नई र मुम्बई सबैभन्दा सफल टिम मानिन्छन् ।
यो पनि…आईपीएलमा आज एक खेल : दिल्ली र लखनउमा कसले मार्ला बाजी ?
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा आज बिहीवार एक खेल हुँदैछ । मुम्बईमा हुने खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र लखनउ सुपर जायन्ट्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।दुई टोलीबीचको खेल राति ७:४५ बजे शुरू हुनेछ ।
नवप्रवेशी टोली लखनउ आज तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ । लखनउ ३ खेलमा ४ अंक जोडेर पाँचौं स्थानमा रहेको छ । यता, दिल्ली दोस्रो जीतको खोजीमा हुनेछ ।
दिल्लीले दुई खेलमा २ अंक जोडेको छ । दिल्ली सातौं स्थानमा रहेको छ ।